२०७२ सालमा यस्तो छ तपाईंको राशिफल – Ram Kumar Pariyar
Next के के खाँदा हुन्छ “फुड पोईजन” ?
Previous बलात्कारीलाई बन्ध्याकरण गर्न निर्देशन
जानकारी · २०७२ बैशाख ४ 0
वर्षको सुरुमा बन्धुबान्धव वा इष्टमित्रसँग असमझदारी बढ्न सक्छ। धेरै परिश्रमबाट थोरै लाभ मिल्ने योग छ। घरखर्च पनि बढ्नेछ। ठूलो लगानीबाट कममात्र फाइदा हुनेछ। साझेदारीमा पनि सम्बन्ध बिग्रनाले यदाकदा अप्ठ्यारोमा परिनेछ। असार २५ पछि बृहस्पतिको अनुकूलताले स्थितिमा सुधार आउनेछ। परिश्रमबाटै घर–जग्गा वा स्थिर सम्पत्ति जोड्ने समय छ। तर, आर्थिक अभावले भने अलि सताउनेछ। व्यवसायमा केही उतारचढाव आए पनि अन्ततः फाइदै हुनेछ। साथीभाइले साथ दिनेछन्। पढाइमा अनुकूल समय छ। तर्कशक्ति बढ्नुका साथै बौद्धिक क्षमता प्रदर्शन गर्ने मौका आउला। प्रयत्न गर्दा विशेष छात्रवृत्ति र अध्ययनका लागि विदेशयात्रा सम्भावना छ। सन्तानबाट फाइदा र सुख मिल्ने योग छ। रोकिएका काम सुरु हुनेछन् र आर्थिक उपार्जनमा सुधार आउनेछ। कष्टस्थानमा शनिको उपस्थितिले नसा, जोर्नी वा गुप्ताङ्गसम्बन्धी समस्या आउन सक्छ। खर्च र ऋणभार समेत बढ्ने देखिन्छ। पुस र माघ महिनामा शत्रुहरूले पनि सताउन सक्छन्, सचेत रहनुहोला। यो वर्ष घरमा मंगलमय कार्य सम्पादन हुनेछन्। धर्मकर्म र समाजसेवामा विशेष लगाव बढ्नेछ। कृषि र पशुपालनमा सामान्य र उद्योग तथा व्यापारमा राम्रै लाभ मिल्ने देखिन्छ। वर्षभरि शनिबार पीपलमा जल चढाउनाले र गणेश, बगलामुखी र काली भगवतीको पूजा–उपासना गर्नाले फाइदा पुग्नेछ। असार, असोज, माघ र फागुन महिनामा बढी फाइदा हुनेछ। साउन, मंसिर र चैत महिना भने अलि प्रतिकूल रहनेछन्।
वर्षको सुरुमा बृहस्पतिको प्रभावले टाढाको यात्रा, धर्मकर्म वा मंगलमय कृत्यका लागि धन खर्च गरिनेछ। तर, साथसाथै पढाइलेखाइ अवरुद्ध बन्ने, व्यवसायमा हानि, रोजगारीमा बाधा प्रतिकूल स्थानान्तरण जस्ता समस्या आइपर्ने देखिन्छ। शनिको प्रभावले अन्यायमा परिने योग छ। विश्वासमा पारेर फसाउनेहरूले सताउनेछन्। अरूको फाइदाका लागि उपयोग भइनेछ। साथीभाइले धोका दिने र परिवारजनले समेत साथ नदिने समय छ। एक्लोपनाको अनुभूति हुनेछ। राहुको प्रभावले विवाद, धनहानि, लाञ्छना जस्ता समस्या आउन सक्छन्। सानो त्रुटिले वर्षभरि दुःख पाइने योग छ। परिस्थिति प्रतिकूल बन्ने समय भएकाले संयमित भएर व्यवहार गर्नुहोला। जन्मकुण्डलीमा राहु र शनि प्रतिकूल हुनेहरूलाई थप बाधा हुन सक्छ। तर, दुवै अनुकूल हुनेहरूलाई फाइदै हुनेछ। विधिपूर्वक बगलामुखी, काली र छिन्नमस्ता भगवती तथा बटुक भैरवको पूजा–उपासना गर्नाले, बृहस्पति–शनि–राहुको मन्त्रजप गर्नाले र आफ्ना इष्टदेवको समेत आराधना गर्नाले फाइदा हुनेछ। शनिबार पीपलमा जल चढाई विष्णुको पूजा गर्नाले पनि समस्याबाट मुक्त रहन सकिनेछ। कात्तिक, माघ, जेठ, असार महिनामा बढी फाइदा हुनेछ। साउन, मंसिर र चैत महिना प्रतिकूल रहनेछन्।
वर्षको सुरुआत फाइदाजनक रहनेछ। बृहस्पतिको अनुकूल प्रभावले प्रगति र भाग्योदय हुने देखिन्छ। स्थायी सम्पत्ति आर्जन गर्ने समय छ। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ्नेछ र मानसम्मान पाइनेछ। घरमा माङ्गलिक कार्य सम्पादन होलान्।प्रयत्न गर्दा नयाँ नोकरी प्राप्त हुनेछ। नोकरीततर्फ हुनेहरूका लागि अनुकूल स्थानान्तरण र पदोन्नतिको समय छ। व्यापार व्यवसायमा प्रगति हुनेछ। नयाँ उद्योग–धन्दाको थालनी गर्न सकिनेछ। समाजसेवा र परोपकारका कार्य गरिनेछ। असार २५ पछि बृहस्पतिको प्रभावले काम रोकिने, पढाइमा बाधा, सञ्चित धन खर्च हुने र कर्जा बढ्ने देखिन्छ। जन्मराशिमा रहेका राहुले शिरमा पीडा, उच्च रक्तचाप, मस्तिष्क र गुप्ताङ्गमा समस्या, अधैर्यपना र विवेकहीनता बढाउने सम्भावना छ। बिनाकारण अनेक चुनौती सामना गर्नुपर्ला। पति/पत्नीबीच असमझदारी बढ्नेछ। आयआर्जनको कमीले ठूलो प्रगतिमा बाधा पुग्नेछ। तापनि, शनिदेवको अनुकूलताले वर्षभरि सहयोगीहरूले साथ दिनेछन्। स्थापित व्यवसाय, कृषिकर्म र उद्योगधन्दालाई निरन्तरता दिन सकिनेछ। शिवपूजा, वटुक भैरव, छिन्नमस्ता र बगलामुखीको पूजा-आराधना तथा राहु, केतु र बृहस्पतिको मन्त्रजप गर्नाले शुभ हुनेछ। असार, साउन, मंसिर, फागुन महिनामा बढी फाइदा हुनेछ। वैशाख, भदौ र पुस महिना प्रतिकूल रहनेछन्।
काममा दुःख भए पनि वर्षको सुरुमा राम्रै उपलब्धि हातलागी हुनेछ। शिक्षा र साझेदारीमा फाइदा हुनेछ। परोपकार र मङ्गलमय कृत्य सम्पादन गरिएला। मानसम्मान पाइनेछ। जीवनसाथी र सन्तानका तर्फबाट भौतिक सम्पत्ति लाभ हुनेछ। घर–जग्गा जोड्ने मौका छ। बौद्धिक कार्यमा सफलता मिल्नुका साथै पढाइमा प्रगति हुनेछ। विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक भ्रमण वा अध्ययन गर्न विदेश जाने मौका आउलाा। आम्दानीको क्षेत्रमा बसेका राहुले ठेकेदारी, सट्टापट्टा र प्राविधिक कामहरूबाट फाइदा दिलाउनेछन्। अतिरिक्त आम्दानी बढ्नेछ। तर, शिरमा बसेका शनिको मध्य साढेसाती समय भएकाले वर्षभरि अनेक झमेला समेत आइलाग्नेछन्। जन्मकुण्डलीमा शनि कमजोर हुनेहरूलाई चिन्ता, कष्ट, जरिवाना, अभाव जस्ता समस्या आउलान्। विभिन्न लाञ्छना लाग्ने र गल्तीबिनै सजायको भागीदार बन्नुपर्ने परिस्थिति आउला। असार २५ पछि बृहस्पतिको प्रतिकूलताले पढाइलेखाइ र काममा बाधा होला। माघ २ पछि झुटा आरोप लाग्नुका साथै नोकरीमा पनि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ला। विधिपूर्वक काली भगवती र बटुक भैरवको उपासना, शनिको मन्त्रजप र प्रत्येक शनिबार पीपलमा जल चढाउनाले तपाईंलाई फाइदा हुनेछ। तपाईंलाई वैशाख, भदौ, असोज र माघ महिना बढी लाभदायी रहनेछन् भने असार, कात्तिक र फागुन महिनामा अलि हानि हुनेछ।
वर्षको सुरुमा आर्थिक अभावले सताउनेछ। विशवासपात्रले धोका दिनेछन्। सहयोगी वा अनुयायीले समेत प्रतिस्पर्धा गर्न थाल्नेछन्। पारिवारिक असमझदारी, बन्धुबान्धवसँग मनमोटाव र छटपटी बढ्ने देखिन्छ। सामाजिक प्रतिष्ठामा कमी आउनेछ। असार २५ पछि बृहस्पतिको अनुकूलताले स्थितिमा सुधार आउनेछ। पढाइलेखाइमा राम्रो नतिजा हासिल गर्न सकिनेछ। अध्ययनका लागि विदेशयात्रा सम्भावना छ। विभिन्न अवसरले पछ्याउनेछन्। दीर्घकालसम्म फाइदा हुने योजना सुरु हुनेछन्। मित्रता, प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्ध स्थापित वा प्रगाढ हुने समय छ। सन्तान र जीवनसाथीको सहयोगले काम सजिलै बन्नेछन्। फलदायी यात्रा हुनेछ र काममा थप उत्साह जाग्नेछ। तर, कष्टस्थानमा राहुको उपस्थितिले विभिन्न बाधाहरू पनि आइपर्नेछन्। कब्जियत वा मलद्वारसम्बन्धी रोगले सताउला। खराब आचरण भएकाहरूको संगत बढ्ने वा कुलतमा परिने सम्भावना छ, सचेत रहनुहोला। माघ २ पछि पतिपत्नीमै असमझदारी बढ्ने योग छ। यो वर्ष प्रतिकूलताबाट मुक्ति पाउन राहु र केतुको मन्त्रजप गर्नाले, छिन्नमस्ता र बटुकभैरवको पूजा–आराधना गर्नाले लाभ मिल्नेछ। शिवजी र नागको पूजा गर्दा पनि फाइदा हुनेछ। वैशाख, साउन, मंसिर र पुस महिनामा बढी फाइदा हुनेछ। जेठ, असोज र माघ महिना प्रतिकूल रहनेछन्।
बृहस्पतिको अनुकूलताले वर्षारम्भ उत्साहवर्द्धक देखिन्छ। पढाइलेखाइमा राम्रो नतिजा हासिल गर्न सकिनेछ। विभिन्न अवसरले पछ्याउनेछन्। यात्रा फलदायी बन्नेछ र काममा उत्साह जाग्नेछ। सन्तानबाट लाभ र सुख मिल्नेछ। दीर्घकालीन योजनाहरू सम्पादन हुनेछन्। प्रेम वा दाम्पत्यमा आत्मीयभाव बढ्नेछ। कृषि र व्यवसायमा उन्नति हुनुका साथै मनग्ये धन कमाउने अवसर जुट्नेछ। नयाँ नोकरीमा प्रवेश, पदोन्नति वा अनुकूल स्थानान्तरण हुन सक्छ। मन प्रसन्न रहनेछ। असार २५ पछि शत्रुस्थानमा बृहस्पतिको गोचरले परिस्थिति अनायासै बिग्रनेछ। काममा अवरोध गर्नेहरूले सताउने भएकाले महत्वपूर्ण योजना गोप्य राख्नुहोला। आफन्तजनसँगै मनमोटाव बढ्न सक्छ। शनि र राहुसमेतको गोचरीय स्थिति विचार गर्दा पारिवारिक असमझदारी, कष्ट, जीवनसाथीलाई अस्वस्थता, झुटा आरोपजस्ता विघ्नबाधा आइपर्ने सम्भावना छ। नसा, जोर्नी वा गुप्तांगसम्बन्धी समस्याले पनि सताउन सक्छ। श्रम र उत्पादनको राम्रो मूल्य नपाइएला। खर्च र ऋणभार समेत बढ्ने देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा पनि केही समस्या आउनेछन्। बटुक भैरव, बगलामुखी र छिन्नमस्ता भगवतीको पूजा-उपासना गर्नाले प्रतिकूल समयमा पनि फाइदा पुग्नेछ । जेठ, भदौ, पुस र माघ महिनामा बढी फाइदा हुनेछ। असार, कात्तिक र फागुन महिना अलि प्रतिकूल रहनेछन्।
- दैनिक नेपाल डटकमबाट साभार
श्रद्धाञ्जली दिवंगत राजनेतालाई !!!